Difaacyada ay kooxda Man City u doonayso bedelka booska uu ka baxay Vincent Kompany oo daaha laga rogay – Gool FM
(Manchester) 19 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay doonayso difaacyada Matthijs de Ligt iyo Harry Maguire si ay bedel ugu noqdaan booska uu ka baxay Vincent Kompany.
Kabtankii Manchester City ee Vincent Kompany ayaa ku dhawaaqay maanta oo Axad ahayd inuu ka tagayo garoonka Etihad, 33-sano jirkaan ayaana ogolaaday inuu kooxdiisii hore ee Anderlecht ka noqdo ciyaaryahan iyo macallin cusub.
Natiijadaas ayaa ka dhigtay in macallin Pep Guardiola uu suuqa ka baadi goobo difaac dhexe oo cusub si uu bedel ugu noqdo booskaas, Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Ingiriiska ayaana warinaya haatan in macallin Man City uu indhaha ku hayo oo uu rabo inuu soo qaato De Ligt iyo Maguire.
Difaaca kooxda Ajax ee De Ligt ayaa la la xiriirinayaa kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub sida Barcelona iyo Liverpool, laakiin Man City ayaa haatan isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso xiddiga xulka qaranka Netherlands.
Dhinaca kale Maguire ayaa weli gacanta ku haysta heshiis afar sanadood ah oo kaga harsan qandaraaska uu kula joogo kooxda Leicester City, inkastoo aysan taasi ka hor istaagaynin inuu xiddigan reer England ka fikiro mustaqbalkiisa.
Tababare Pep Guardiola ayaa sidoo kale raadinaya bedelka difaaciisa kale ee Nicolas Otamendi, kaasoo dib ugu laaban kara horyaalka La Liga inta lagu guda jiro suuqa xagaaga.